रिडीको तिनमुखे पुल निर्माणमा खै नेताको ध्यान पुगेको ? | Ratopati
personप्रेम सुनार exploreरुपन्देही access_timeअसोज २, २०७५ chat_bubble_outline0
बुटवल– प्रशिद्ध धार्मिक क्षेत्र रिडीमा तिन जिल्ला जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको चार बर्ष बित्दा पनि ५ प्रतिशत पनि काम नभई अलपत्र परेको छ । तत्कालिन सांसद तथा नेपाली कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौड्यालले २०७१ मंसिर १५ गते संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
सो पुल २०७४ असार ९ गते निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुने सम्झौता भएको थियो । शिलान्यास समारोहमा नेता भण्डारीले तिन बर्षमै सक्ने उद्घोष गरेका थिए । तर अहिले ठेक्का सम्झौता सकिएको १ बर्ष वितिसक्दा पनि पुलको काम एकरती अगाडी बढ्न नसेके पछि स्याङ्गजा पाल्पा र गुल्मीबासी निरास भएका छन ।
पुलको मुख्य पिलरको केही भाग खोलाबाट उठाउँदै दुईचार जना कामदारले काम गरिनै रहेको झारा टार्ने मात्रै गरिएको छ । यता पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाका तीनतिरबाट १ सय ७७ दशमलव ४ मिटर लम्वाईको तिनमुखे झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने र मध्य भागमा तीनवटै पुललाई जोड्ने ४२ मिटर अग्लो पिलर बनाउने सम्झौता भएकोृ थियो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक बिभाग (डोलिडार) ले निर्माणका लागि ९ करोड ८८ लाख २६ हजार ३ सय ३२ लागतमा तीनवटा कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गरेको थियो । नयाँबाटो, रुबिना र मना जेबीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । शिलान्यासमा आएको त्यसका निर्माण ब्यवसायीले अहिले सम्म मुख देखाएका छैनन् ।
नमूना पुलले नेपालको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र रहेको गुल्मी जिल्लाको रुरु गाँउपालिका, पाल्पाको रुरु धाम, स्याङ्गजाको कारीकोट जोड्ने छ ।स्थानीयवासीले अहिलेसम्म भएका काम पनि गुणस्तीय नभएको आरोप लगाएका छन् । निर्माण सामाग्रीको प्रयोगमा ठेकेदार कम्पनीले कम गुणस्तरको प्रयोग गरेको आरोप स्थानीयको छ ।
नेपालको हकमा यो पुल नयाँ प्रयोग भएकाले नक्सा तयारीमै ढिलाई भएको ठेकेदार कम्पनी नयाँबाटो (रुबिना) मना जेबिका प्रमुख महेन्द्र अधिकारीले बताए । पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अबधी सकिन लागे पनि नक्सामै एकवर्ष लाग्दा ढिला भएको अधिकारीको भनाई छ ।
ढिलाई हुनुमा यस अघि कांग्रेस नेता तथा तत्कालिन सांसद चन्द्र भण्डारीलाई दोषारोपण पनि गरियो । तर अहिले त्यसै क्षेत्रका संघिय सांसद प्रदिपकुमार ज्ञवाली मन्त्री समेत हुनु भएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीको ध्यान जान नसकेको हो कि ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीका स्वकिय सचिव जंग नेपाली भन्छन–‘ उनको ध्यान नगएको होईन, ठेकेदार बेपत्ता भएपछि काम अगाडी बढ्न नसकेको हो । पहिला छुट्टाएकै रकम बराबरको काम नभए पछि अर्को रकम विनियोजन गर्न नमिलेको हो ।